“ယနေ့ခေတ် ဘာသာရေးမှ ဗိုင်းရပ် (virus) အယူများ (ဒုတိယပိုင်း) (ပရမတ္တသစ္စာ ဗိုင်းရပ်အကြောင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » “ယနေ့ခေတ် ဘာသာရေးမှ ဗိုင်းရပ် (virus) အယူများ (ဒုတိယပိုင်း) (ပရမတ္တသစ္စာ ဗိုင်းရပ်အကြောင်း)
Posted by ashinariya on May 16, 2012 in Buddhism | 39 comments
အနောက်နိုင်ငံမှ ဆေးပညာရှင်များမှ ပရမတ်ဝိပဿနာပြဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါအား “လူကြီးမင်းတို့ တရားစခန်းမှာ ၃-နာရီကြာ (meditiation) တရားထိုင်ရင် ရမယ့် အခြေအနေကို ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီက ဆေးဝါးတွေက တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်အောင် တာဝန်ယူပေးပါ့မည်”ဟု ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ သူတို့ဆေးဝါတွေသာ တွင်ကျယ်လာရင် လူတွေအခိ်ျန်ကုန်ခံပြီး ရိပ်သာတွေ သွားစရာမလိုတော့မလိုဖြစ်နေပါသည်။.စဉ်းစားစရာတွေပါပဲ။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ တရားအားထုတ်မှု နည်းစနစ်များကိုသာ ဝေဖန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နားလည်းပေးပါ။
Thwin Myint says:
ထေရ၀ါဒ တရားစခန်းများကို တိုက်ခိုက်စော်ကားထားခြင်းကြောင့် လို့ဆိုရအောင် ဘာတွေမှားပြီးဖေါ်ပြထားသလဲ ဘာတွေစော်ကားထားလဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ ခင်ဗျားကဒီလိုလုံးပြီး မှားသလေး စော်ကားသလေးလျှောက်ပြောနေလို့မရဘူး ။ဦးဦးပါလေရာ ခင်ဗျား ဟာ ဘာသာရေး၊ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့ နယ်ပယ်မှာ အသိပညာဗဟုသုတ ပြည့်ဝတယ်လို့ ကိုယ့်ကို ကိုယုံကြည်ရင် ခင်ဗျားပြောသမျှစကားတိုင်းဟာ အချက်အလက်ပြည့်စုံရမယ် အကျိုးအကြောင်းခိုင်မာရမယ် စကားရှေ့နောက်ညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတပါးကိုဝေဖန်မယ်၊တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အချက်အလက်အကျိုးကြောင်း ပြည့်စုံခိုင်မာပါစေ။အချက်အလက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဝေဖန်ပါ ပြန်ပြီးချေပ ပါ။ ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်ရင် ဘာသာရေး မဆွေးနွေး ပါနဲ့ ဘာသာရေးစကားမပြောပါနဲ့။
Parasite ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပ၊ တွယ်ကပ်ပီးမှ ဖျက်ဆီးတာလေ။ အော် မိုးပြာမိုးပြာ….
ဖြစ်ရလေတယ်….။ ဘုရားကပဲ အာဠကတို့ ဥဒကတို့ဆီမှာ… ပရမတ်တရား သင်ခဲ့ရတယ်လို့…။ အဲ့ဒီမှာ..ကျင့်တာ… သမထလေ.. ရူပဈာန် အရူပဈာန်တွေကို ကျင့်တာလေ.. ၀ိပဿနာမှ မဟုတ်တာ ဘိုးတော်မိုးပြာ တို့ရဲ့…။သမထဆိုတာ စိတ်က တစ်နေရာတည်းမှာ စူးစိုက်နစ်ဝင်နေတာ.။ အဲ့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကို..မသိတာမျိုး ဖြစ်တယ်….။ ၀ိပဿနာဆိုတာ အသိတွေမဲ့သွားအောင်ကျင့်နေတာ မဟုတ်ဘူး..။ စိတ်မှာ ရုပ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်လာသမျှတွေကို သိအောင်လုပ်နေတာ..။ Analysis လုပ်နေတာဗျ…။ ပြီးတော့ဗျာ သမထပဲ ကျင့်ကျင့် ၊ ၀ိပဿနာပဲကျင့်ကျင့် ဒီတရားတွေကျင့်လို့ပဲ လူတွေက လူညွန့်တုံးသွားမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ဘိုးတော် ပြောတာ လက်တွေ့ကျရဲ့လား ပြန်စဉ်းစားကြဦး…။ စိတ်တွေ တည်ငြိမ်သွားတာ..။ စိတ်စူးစိုက်မှုအားကောင်းသွားတာ… အဲ့ဒီလူ လူညွန့်တုံးသွားတယ် ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ ကမ္ဘာလှည့်ပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး…။
lynnsatyar ရဲ့စကားမှာ သမထဟာ ရူပရော…. အရူပရော ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်… အဲ့ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ သမထဟာ lynnsatyar ပြောခဲ့သလိုပဲ စိတ်က တစ်နေရာတည်းမှာ စူးစိုက်နစ်ဝင်နေပြီးတဲ့ အဲ့ဒီစူးစိုက်နစ်ဝင်နေတဲ့ စိတ်ဟာ ဘယ်အပေါ်မှာ ချည်တိုင်လုပ်ထားလဲဆိုတော့ ရုပ်အာရုံတစ်ခုခုမှာ ချည်တိုင်အဖြစ်လုပ်ထားပြီး ဘယ်ကိုမှ ပျံ့လွင့်မသွားအောင် ပြုကျင့်တာမျိုးပါ။ သမထဟာ ရူပဈာန်ကိုသာလျင် ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၀ိပသနာဟာ အရူပဈာန်ဆိုက်ရောက်စေတဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ lynnsatyar ရဲ့စကားအတိုင်းပြန်ကောက်ရရင် စိတ်မှာ ရုပ်မှာ ဖြစ်ဖြစ်လာသမျှတွေကို သိအောင်လုပ်နေတာ ဆိုရင် အဲ့ဒီသိလာတာသည်ပင်လျင် နောက်ဆုံးမှာ အပျက်သဘောဖြစ်နေပြီး ရုပ်၊ နာမ် ဖြစ်ပျက်ဆုံးနေတာကို မြင်ပါတယ်…. အဲ့ဒီသဘောသည်ပင်လျင် အရူပဖြစ်ပါတယ်။ Analysis လုပ်ရမှာကို အဲ့ဒီလို ရုပ်၊ နာမ်တွေကို မဟုတ်ပဲ ကံအမှု သင်္ခါရတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီူးတော့ lynnsatyar ဆိုခဲ့သလို ((ထိန်းပြီးတော့ အဲ့ စိတ်ကလေး ကိုယ်ကလေးတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဘယ်လိုပျက်တယ်..ဆိုတာကို analysis လုပ်မှ ပညာဝင်တာ…။ )) အဲ့ဒီလို Analysis လုပ်တာနဲ့ သမထ ၀ိပသနာ ရှုတာဟာ တခြားဆီဖြစ်ပါတယ်။ သမထ ၀ိပသနာဟာ ကံတွေမဖြစ်ပွားအောင် ဖြစ်စေ၊ ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေအပေါ်မှာ ဖြစ်စေ၊ တခြား စိတ်ဆိုး စိတ်ဆာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပွားလဲ ဆင်ခြင်တာနဲ့ လားလားမှ မဆိုင်တဲ့ ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သမထ ၀ိပသနာဟာ အထက်ပါပြောခဲ့တာတွေကို ဆင်ခြင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ တအား ဇွတ်ကြိတ် မျက်စိမှိတ်ပြီး စိတ်ကို ချုပ်တည်းနေတဲ့ အကျင့်မျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ lynnsatyar က သမထ ၀ိပသနာကျင့်နေစဉ် စိတ်ကို ချုပ်တည်းထားလို့ဘာကံမှ မဖြစ်တာကိုပဲ သီလလို့ထင်နေပုံပါပဲ။ အဲ့ဒါတွေကျင့်နေဆဲမှာ စိတ်ကိုချုပ်တည်းထားလို့ ငြိမ်သက်နေတာကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ထင်နေပုံပဲ…. အဲ့ဒါဟာ ပရမတ္ထသစ္စာက ပေးနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်နေဆဲကာလမှာပဲ ငြိမ်းချမ်းနေတယ်။ မမြဲပါဘူး။ ကို lynnsatyar လည်းကိုသိတာလောက်မှာပဲ လမ်းဆုံးမနေပဲ တကယ်လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ http://ariyathitsa.org/ မှာ လေ့လာလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကို lynnsatyar ထရ၀ါဒ သံဃာတော်တွေက ပိဋကတ်တွေ လိုအပ်ရင်တော့ အတုလုပ်ပြီး အင်ထုလေ့ရှိပါတယ်။ အကြောင်းစုံသိချင်ရင်တော့ ဓမ္မ၀ိဟာရိ နိဒါန်းမှာ ပါပါတယ်။ ကျောက်သင်္ဘော ၀ိနစ္ဆယလုပ်တုန်းကပါ။ အောက်ပါလင့်မှ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် http://www.4shared.com/office/Kf-hE2ny/Dhammaviharri_Niddan.htm
သမထတွေ ၀ိပသနာတွေ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့
ငါအခုထောက်ပြထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကို အ၇င်ရှင်း
http://myanmargazette.net/95668/uncategorized-other/copypaste အရ ယခုပစ္စုပ္ပန်ကံတွေထပ်ခါထပ်ခါ လွန်ကျူးမိနေတဲ့ ဘ၀ဖြစ်စဉ်တွေကိုပဲ သံသရာလို့ ဖွင့်ဆိုတာလို့ နားလည်မိပါတယ်။
(ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပွဲဟာ ဦးနုနဲ့ ဖဆပလအဖွဲ့တို့၊ ဦးဝိစိတ္တတို့၊ မဟာစည်တို့၊ ညောင်ရမ်းတို့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေရတာကလွဲလို့ တခြားအကျိုးကတော့ မပြောလောက်ပဲ ဖြစ်တယ်။) လို့ ပြောတာ လွန်လားဗျာ . ။
သိချင်ရင် . . .
http://myanmargazette.net/67522/atheism-agnosticism-buddhism-christianity-hinduism-islam-judaism-new-age-pagan-earth-based-religions-religious-concepts-self-help-spirituality-wicca-witchcraft-religion-spiritualit/buddhist-buddhism-asia-theravada-mahayana-zen အဲဒီမှာဖတ်။ ဒါပဲ . . . .. ။
ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အထဲမှာ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ ငြိမ်နေတာကို ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ ထင်နေတာမျိုး တစ်ခုမှ မပါဘူးရယ်..။ အဲ့လိုစိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားလို့ ငြိမ်သက်နေတာကို ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်လို့ ဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်၌လည်း မယုံကြည်ခဲ့လို့ ဥဒကတို့ ဆီက ထွက်ပြီး ကိုယ်တော်တိုင် နည်းလမ်းသစ်ရှာ ကျင့်ကြံတော်မူခဲ့တာပါ..။ ရုပ်နာမ် ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်တာ အရူပပါလို့ ဘယ်သူကပြောတုန်းဗျ..။ သမထ ကျင့်စဉ်မှာ ရုပ်တွေ နာမ်တွေကို ကြည့်တာ တစ်ခုမှ မပါဘူး ။ ကသိုဏ်းအာရုံတစ်ခုထဲမှာ စိုက်ပြီး… ကျင့်ရတာ… အဲ့ဒီမှာ… ရုပ်ကို အပြစ်မြင်ပြီး ကျင့်တဲ့လူက.. သူ့ရဲ့ ထက်မြက်လွန်းတဲ့စိတ်အစွမ်းကြောင့်… သေလွန်ရင် ရုပ်မရှိတဲ့ အရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်…။ နာမ်ကို အပြစ်မြင်ကျင့်တဲ့သူက နာမ်မရှိတဲ့ ရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်…။ ဈာန် ဟာ ကိလေသာတွေကို အမြစ်ပြတ် မသတ်နိုင်လို့… ဈာန်လျောပြီး ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အကြောင်း မုဒုလက္ခဏာဇာတ် စတာတွေမှာ.. ဟောထားတာပဲ….။ သမထ ၀ိပဿနာ ၊ သမထ ၀ိပဿနာဆိုပြီး စကားလုံးတွေကို လုံးလုံး မချပါနဲ့ဗျ.. ။ သမထနဲ့ ၀ိပဿနာက တစ်ခြားစီပဲ…။ သမာဓိထူထောင်စရာ ကမ္မဌာန်း လေးဆယ်ကို မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး.. တပည့်သာဝကတွေကို သူ့စရိုက်နဲ့ သင့်လျော်ရာ… ကမ္မဌာန်းပေးပြီး သမာဓိ အတန်အသင့်တည်ကြည်ပြီဆိုတော့မှ သစ္စာလေးပါးတရားတွေကို ဟောကြားတော်မူပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်ထိုင်တည်းနဲ့ မဂ်ဖိုလ်ရသွားတဲ့ လူတွေကိုတော့ ဘယ်မှာ ကသိုဏ်းလေးဆယ်ထိုင်လို့လဲလို့တော့ စကားမကတ်နဲ့…။ သမာဓိဆိုတာ စိတ်က တစ်နေရာတည်း စူးစိုက်နေတာ..။ ဘုရားရှင်ဟောကြားတာကိုပဲ သူ့အာရုံ စူးစိုက်နစ်ဝင်နေတာလဲ သမာဓိပဲ…။
ထေရ၀ါဒ သံဃာတော်တွေက ပိဋကတ်တော်တွေကို ဘုရားဟောအတိုင်း တစ်လုံးမှ မပြင်ထားပါဘူးလို့ ခေတ်အဆက်ဆက် အာမခံခဲ့တာပါ..။ အခုတော့ လိုအပ်ရင် အင်ထုတယ်ဆိုပြီး ပြောတာ ဘယ်လောက်ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားနဲ့တုန်းဗျ….။ဟုတ်ပြီ ခင်ဗျားတို့က ထေရ၀ါဒ သံဃာတွေက ပိဋကတ်ကို အတုလုပ်ထားတယ်ဆို… ဘယ်ကျမ်း ဘယ်ဟာကို အတုလုပ်ထားတာလဲ…။ ဘယ်လို အတုလုပ်ထားလဲ…။ ခင်ဗျားတို့ကကျတော့ ဘယ်ပိဋကတ်ကို ဘယ်ကျမ်းကို ကိုးကားနေကြတာလဲ..။ ခင်ဗျားတို့က အမှန်လို့ ယူတဲ့ ကျမ်းတွေကို list လုပ်ပြဗျာ…။ ခင်ဗျားတို့က တစ်ခုခုပြောလိုက်တိုင်း… တခြားကျမ်းဂန်ခိုင်ခိုင်ကို မညွှန်းတတ်ဘူး…။ ခင်ဗျားတို့ ရှင်ဥာဏ ပြောထားတာကိုပဲ ပြန်ပြန်ညွှန်းနေကြတယ်…။ အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို မယုံဘူးဗျာ.. ။ တစ်ခြားခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားပြ…။ အတ္တကိလမထနုယောဂဆိုတဲ့ အကျင့်ကိုလည်း ပေါက်ကရ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားသေးတယ်…။
(ထေရ၀ါဒ သံဃာတော်တွေက ပိဋကတ်တော်တွေကို ဘုရားဟောအတိုင်း တစ်လုံးမှ မပြင်ထားပါဘူးလို့ ခေတ်အဆက်ဆက် အာမခံခဲ့တာပါ..။)ဆိုတော့ . . .
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်း သူတို့က ခေတ်အဆက်ဆက်ပြင်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောသလားဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့လိုပါသည်။
မြန်မာထေရ၀ါဒီတွေ ဘုရားဟောကို ပြင်/မပြင် စဉ်းစားဝေဖန်နိုင်ဖို့ ကတော့ . . .
http://myanmargazette.net/67522/atheism-agnosticism-buddhism-christianity-hinduism-islam-judaism-new-age-pagan-earth-based-religions-religious-concepts-self-help-spirituality-wicca-witchcraft-religion-spiritualit/buddhist-buddhism-asia-theravada-mahayana-zen တွေမှာ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာပေးပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။။
အလွန်ကြောက်စရာကောင်းအောင် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အားဖျက်ဆီးထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အယောင်ဆောင်နေသော တရားတုများကို တာဝန်သိစွာ စိစစ်ဖော်ထုတ်တင်ပြပေးနေတာပါဟု နှလုံးသွင်းနားလည်ပေးပါ။
မိုးတိမ် ရဲ့ အသိအမြင် ၀ါဒစွဲတိမ်လွှာတွေ ဖုံးနေတာကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပေးတယ်ဗျာ။
ဟိန္ဒူ၊ ဂျိန်းတို့ရဲ့ ပရမတ္တသစ္စာတရားများက ဗုဒ္ဓတရားယောင် အယောင်ဆောင်ထားခြင်းမှုဖြစ်လေသည်။
မြတ်စွာဘုရာရှင်ထက်ထက်မှာ တရားသိမြင် သဘောပေါက်ကြတာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါက ယခုတရားစခန်းများလို ဘယ်နှစ်ရက် တရားခန်း၊ တရားဘယ်နှစ်ကြိမ်ထိုင်ရတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးများဖြင့် တရားပေါက်တယ်လို့ မတွေ့မိပါ။
(ဒီအရိယသစ္စာအသိဟာ လူ့အရည်အသွေးတွေမြင့်လာအောင် လူ့အမှုတွေကို စိစစ်ပြုပြင်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲနဲ့လည်း တူတာပေါ့နော်”) ဆိုထားတော့
မှန်ကန်တဲ့ လူ့အမှုတွေနဲ့ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်၊ နေထိုင်တတ်သွားတဲ့ အသိတရားလမ်းညွှန်မှုနဲ့ နေသွားခြင်းပါလို့ အကြမ်းဖျဉ်းပြောဆိုလိုပါတယ်။
တရားကျင့်ကြံကြမှုတွေသည် လူရဲ့စိတ်ငြိမ်သွားဖို့အတွက်လား ?
သူတို့ကတော့.. လူရဲ့စိတ်တွေ ငြိမ်သက်အေးချမ်းစေပြီး.. နိဗ္ဗာန်သွားဖို့တဲ့..
ဒါဆိုရင်တော့ ရိပ်သာတွေမှာ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေ သွားလှူဦးမှပဲ၊
Antivirus တောင်မှ အမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်…
– ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Antivirus ကို ကျွန်တော် အခုထိ မတွေ့ရသေးဘူးဗျာ…
ashinariya က ဘယ်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်ပါသလဲ ဘာသာမဲ့လား ရှင်းလင်းစွာသိလိုပါသည်။
အင်း ပြောရရင်တော့ ဒီပို့စ်ကို တော်တော်ကြီးကို ကြာခဲ့ပြီပဲ။ အခု အပြင်က ပြန်လာလို့ ကွန်မန့်တတ်နေတာ တွေ့တာနဲ့ ဝင်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီ ashinariya ဆိုတဲ့ စာရေးသူက ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိုးပြာဝါဒီလို့ ရဲရဲ ဝန်ခံရဲတဲ့ စာရေးသူပဲ။ အဲဒီလို သတ္တိမျိုးမှ သဘောကျတာ။ အခုတလောလဲ မိုးပြာဆရာတွေ နည်းနည်းပျောက်နေလို့ ပျင်းတောင်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီ ashinariya ဆိုတဲ့ စာရေးသူ ပြန်လာဖြေရင်တော့ မိုးပြာတရားတွေ နည်းနည်းမေးကြည့်ရအုံးမယ်။
ashinariya က မိုပြာဝါဒီ ဆိုတာဟုတ်ပါသလား ခင်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်ဖြေပေးပါ
လူတွေ လူတွေ သူများကြတော့ ဒီမိုကေ၇စီ ..ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကိုယ့်ဆာဗာလေးအဟက်ခံရမှာတော့
ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်တန်ရာ တန်ရာပဲ ရမယ်..
ကဲ အဟောင်းကို ဆက်ချင်သပဆိုလဲ ဆက်ကြတာပေါ့ သဂျီးရေ။
အဲလူဂျီး လစ်ဘရယ်အော်ပြီး လစ်ဘရယ်မကျပုံက ပိုပို သိသာထင်ရှားလာပေါ့။